Daawo Video:Faysal Cali Waraabe Siilaanyo Kula Taliyay in Uu Ka shaqeeyo Somalinimo Cid isku Dhaanta aanay jirin Soomaaliya.
Faysal cali waraabe oo shir ka dhacay hargeisa uga hadlay shirkii igad ee muqdisho ku soo xidhmay ayaa sheegay in loo baahan yahay in soomaali daneheeda ka wadatashato oo aan la isku adeegsam dawlado shisheeye.
Waxaana faysal sheegay in xukumada somalia ay joojiso adeegsiga dawladaha shisheeye.
Sidoo kale waxaa uu siilaanyo ugu baaqay in uu ka qeyb qaato talada soomaaliya iyo sidii dadkan aan kala go ay kalana maarmayn la iusgu soodhaweynlaha
Isku soowada duubo faysal ayaa hadalkiisa waxaa ka muuqata is badal siyasadeed oo u janjeedha dhanka umqdisho tan iyo maalintii uu shaaciyay in uu ka qeyb qaadan dooono ololaha doorashada somalia.
Akhriso: War-Murtiyeedkii kasoo baxay Shirkii Madasha Doorashooyinka ee lagu Qabtay Muqdisho
Madasha Hoggaanka Qaran ayaa kulan ku yeelatay Muqdisho 06 - 14 Seteember 2016. Kulankaan waxaa Shir-guddoominayay Madaxweynaha Somalia, Xasan Sh. Maxamuud, waxaana goobjoog ka ahaa; Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka, Maxamad Sheekh Cusmaan Jawaari; Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke iyo dhamaan madaxda maamul-goboleedyada Dalka ka dhisan.Haddaba Akhriso War-mutiyeedkii laga soo saaray Shirkii Madasha Wada-tashiga Qaran ee Doorashooyinka sannadkan ka dhacaya Soomaaliya oo ka kooban 14-qodob.
4.7.) Labada kursi ee ku qoran beesha Mushuunguli ee yaala degaan doorashada Jubbaland oo mid ka mid ah cabasho ka jirtay - iyadoo ay horay u Haysan jireen Beesha Eylo Jafaay, waxay madashu go’aamisay in kursigaas xalkiisa ay go’aan rasmi ah kawada gaaraan labada Madaxweyne ee Jubbaland iyo Konfur-galbeed iyagoo la kaashanaya odayaal dhaaameedka ay khuseyso.
6.1.) Madashu intii kulankeedu socday - 6-14 Seteembar 2016 waxay ansixisay waajibaadka iyo awoodaha guddiga xallinta khilaafaadka, waxaana isla markaas la dhisay lana ansixiyey xubnaha Guddiga oo ka kooban shan iyo labaatan (25) xubnood.
14.1.) Madashu waxaa ay u mahadcelineysaa Safiirada idman ee haweenka Somaaliyeed iyo guddiga xildhibaanada haweenka ee baarlamanka federaalka oo runtii howl-karnimo aadka u dheer muujiyay iyo inay ka go'an tahay ka gun gaaridda qoondada haweenka ee 30%.
Ciiidamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland, kuwa xoogga dalka iyo AMISOM oo is garabsanaya ayaa howlgallo ballaaran oo ay saaka ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Kismaayo ayay kula wareegeen deegaano dhowr ah oo dhanka waqooyi kaga beegan Kismaayo, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada Jubaland.
Afhayeenka laamaha amniga Jubaland Axmed Max'ed Max'uud (Axmed Carab) oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in howlgalladaasi ay qeyb ka yihiin dadaallada ay wadaan ciidamada Jubaland iyo kuwa dowladda ee la doonayo in Al-shabaab looga saaro deegaanada Jubooyinka.
"Ciidamada Jubaland waxay saaka Al-shabaab ka saareen deegaanada Wirkooy, Baar-Zanguuni, iyo deegaanka Singaleer, Shabaab waxaan ka dilnay 7 Askari, annaga Alle mahadii wax khasaaro ah nama soo gaarin," ayuu afhayeenku hadalkiisii raaciyay.
Shir madaxeedka IGAD oo magaalada Muqdisho ka furmay
Madaxda urur goboleedka IGAD ayuu shir hal maalin ah uga billowday magaalada Muqdisho. Waxaa madasha shirka ku sugan hogaamiyayaasha dalalka Kenya, Itoobiya , Ugandha iyo Soomaaliya.
Waa shirkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee magaalada Muqdisho ka dhaca muddo 30 sano ku dhow.
Sabtidii aanu soo dhaafnay ayaa la filayey inuu dhaco kulankan, balse dib ayaa loo dhigay, mana caddeyn sababta dib loogu dhigay.
Shirka waxaa diiradda lagu saarayaa arriimaha doorashooyinka iyo amaamnka Soomaaliya iyo sidoo kale qalalaasaha ka taagan dalka Suudaanta Koonfureed, sida uu BBC-da u sheegay wasiirka arrimaha debadda ee Soomaaliya.
IGAD waxaa xubno ka ah dalalka Itoobiya, Uganda, Jibuuti, Kenya, Sudan, Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya
Image captionShirka IGAD ayaa lagu wadaa in uu maanta ka furmo MuqdishoCalamada dalalka IGAD yaa la suray garoonka diyaardaaha iyo madasha shirka ee Huteel Peace.
Ammaanka guud ahaan magaalada ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoo maalmihii la soo dhaafay gaadiidka laga mamnuucay in ay isticmaalaan waddooyinka qaar.
Waddada aada garoonka diyaaradaha iyo waddada Maka Al-Mukarama ayaa laga mamnuucay inay isticmaalaan gadiidka iyo dadka lugaynaya.